... အဘယ်ကြောင့်ဖက်ရှင်အဖြစ်ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်နောက်တဖန်ရေးလိုက်? မိတ်ကပ်တွေလား အတင်းအဖျင်း? လိင်? သို့မဟုတ်ထိုထက်မက? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းဟာအမြင်အသစ်၊ ဦး တည်ချက်အသစ်၊ အရာရာတိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီးအရာရာတိုင်းဟာအရိပ်အယောင်အသစ်တွေနဲ့အတူထွန်းလင်းတောက်ပနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးစကြဝuniverseာဟာအဆုံးမဲ့ပြီးအမြဲတမ်းအရောင်အသစ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ palette ပါ။ ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ထိခိုက်လွယ်သော၊ လှပသောဉာဏ်ရည်နှင့် ... အလှအပသည်ကမ္ဘာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
Da Denominare ၁၊ ၁၅ မှ ၆၅၀၂၀ Turrivalignani (PE) မှတစ်ဆင့်
Da Denominare 1, 15 - 65020 Turrivalignani (PE) မှတစ်ဆင့် Studiocolordesign ကြော်ငြာလုပ်ပိုင်ခွင့် VAT နံပါတ် 01847900691